Mobile House: Upgrading Android 2.1 to 2.2.1 Froyo(Huawei c8500)
Upgrading Android 2.1 to 2.2.1 Froyo(Huawei c8500)
ဒီနည်းက　ဖုန်း　အားလုံးရမယ်လို့　တော့　အာမ　မခံပါဘူး　ဒါဗေမဲ့　အောက်က　update ဖိုင်နဲ့လောလောဆယ်　တင်ထားတာ　၈　လုံးကျော်လောက်တော့ရှိပါပြီ　အားလုံး　ဆင်ပြေပါတယ်　ကျန်တော့ဖုန်းဆို　၁၀　ခါမကတော့ပါဘူး　:D ပျက်ရင်တော့ ကျန်တော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးနော်　:)
(မှတ်ချက် ။ ။ upgrade မလုပ်ခင် ဖုန်း ကို battery အားပြည့်အောင်သွင်းထားပါ)
အရင်ဆုံး　ကိုကိုရဲ　တင်ပေးထားတဲ့　upgrade　ဖိုင်ကို　အောက်တွင်　အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ　၊
Click here to download 2.2.1 froyo upgrade file
download ပြီးရင်တော့　ရလာတဲ့　zip　ဖိုင်ကို　ကွန်ပျုတာထဲမှာပဲဖြည်လိုက်ပါ　ဖြည်လိုက်ရင်တော့　dload ဆိုတဲ့ဖိုဒါတခုတွေ့ ပါလိမ့်မယ် အဲဖိုင်ထဲမှာ updata.app ဆိုတဲ့နာမယ်တဖိုင်ရှိပါလိမ့်မယ် ။ dload ဖိုဒါ ကို SDcard (SDcard/.) ထဲ သို့copy ကူးထည့်လိုက်ပါ ။
အခုဆိုင် upgrade လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ ၊ စက်ကို power off လုပ်လိုက်ပါ ၊
ပိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ ( Power + Volume up + End call (အနီ ) ) ကိုပြိုင်တူနိုပ်လိုက်ပါ ။
အခုဆိုရင်တော့ ပုံ(၃) အတိုင်း update fail ဆိုပီး ပြပါလိမ့်မယ် စက်ကို battery ခဏဖြုတ်ပီး ပြန်ထည့်လိုက်ပါ၊
နောက်တခါ ( Power + Volume up + End call (အနီ)) နိုပ်ပြီး ပြန် လုပ်ပါ ၊ ဒီတခါတော့ ရသွားပါလိမ့်မယ် အားလုံးပြီးရင်တော့ သူ့ ဘာသာ Rebooting လုပ်ပြီး huawei logo နဲ့boot တက်လာပြီး အောက်ကပုံအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အခု　ပုံ(၄)　အပေါ်ပုံမှာဆိုရင်　တရုတ်လိုနဲ့　button နှစ်ခုပါပါတယ်　ညာဖက်　က button ကိုနိုပ်ပါ　အောက်ကပုံအတိုင်းလာမေးပါလိမ့်မယ် ။
English(United States) ကို　ရွေးပါ　အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တဆင့်ကတော့　အပေါ်ပုံ(၅)　အတိုင်း　ပေါ်လာရင်တော့　welcome to C8500 ပေါ်က　Android logo က　တချက်ဖိလိုက်ပါ　။အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ဒီအဆင့်　အပေါ်ပုံမှာတော့　Gmail setup လုပ်မလားမေးတာပါ　Skip ကိုရွေးလိုက်ပါ　အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
Next ကိုရွေးပါ　အောက်ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်
သက်ဆိုင်ဖြည့်ပီး　Next ကိုနိုပ်ပါက　အောက်ကပုံအတိုင်း　upgrade လုပ်တာအောင်မြင်ပါပြီ
ဒီလောက်ဆိုဆင်ပြေမယ်လို့　မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ　စက်တခုခုဖြစ်ရင်တော့　ကျန်တော်တာဝန်မယူပါဘူးး　:D
Posted by Mobile House at 6:19 AM
လူရိုး June 21, 2012 at 6:27 PM
U8100 ကိုကော Froyo တင်လို့ရမလားခင်ဗျာ
လူရိုး June 21, 2012 at 8:28 PM
Error ပြလို့ပြန်လုပ်ကြည့်လည်း error ထပ်ပြပါတယ်......
ပါဝါပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ တက်လာတယ်ခင်ဗျ
U8100 က c8500 ဖြစ်သွားတယ်
ပြီးတော့ no service
Mobile City June 28, 2012 at 10:57 PM
U8100 က Gsm လေ c8500 က CDMA လေ။ နောက် ပ ဗျာ ။
When I finish upgrade 2.2.1, 3G Network Signal is missing and couldn't use Internet with both Phone and computer. I tried to setup APN setting but still couldn't see 3G signal.
Mobile House July 3, 2012 at 4:21 AM
change user name mpt@c800.mm
OK. Got it after change mtp@c800.mm thanksalots
Anonymous July 29, 2012 at 10:35 PM
after upgradingd to 2.2. PC suite not working? how to do? please help me?
How to install Froyo (Android 2.2) into Xperia X8
Android ဖုန်း မှာ Contact ထဲမှာ လူတစ်ဦးချင်းစီကို...
Upgrading Android 2.1 to 2.2.1 Froyo(Huawei c8500)...
Android phone တွင်မြန်မာဖောင့်နှင့်ကီးဘုတ်သွင်းခြင...
Huawei c8500, c8600 CDMA ဖုန်းပေါ်တွင် မြန်မာဖောင့်...
Huawei pc suit and driver package